Madaxweynaha Somaliya oo sheegay in uu la shaqayn doono Raiisal Wasaaraha, kana fogaanayaan is qab qabsi (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowladda Federalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu maanta ballanqaaday in uu si dhow ula shaqayn doono Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayna ka fogaan doonaan khilaaf siyaasadeed.
Madaxweynaha, ayaa wuxuu kaloo sheegay in Xukuumadda uu soo dhisi doono Ra’iisal Wasaarihiisa cusub, ay noqon doonto mid ay iska wada dhex arkaan dhammaan dhinacyada dalka ka jira oo idil.
“Waxaan mar kale u ballanqaadayaa xubnaha Baarlamaanka in Xukuumadda uu Ra’iisal Wasaaruhu soo dhisayaa ay noqoneyso mid inta suurta gal ah ay ku mideysan yihiin xoogaga siyaasadeed ee dalka.”
“Waxaan idinka mahadcelinayaa ansixinta Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somaliya, oo aan u soo magacaabay Danjire Cumar oo kalsooni aan ku qabo inuu howlaha harsan dhameystiri karo, sidoo kalana uu sii wadi karo hawlihii labadii sano ee la soo dhaafay la qabtay.” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha, ayaa shacbiga Somaliyeed ugu hambalyeeyay tallaabada horumarka ah eek u wajahan dhismaha Xukuumadda Soomaaliya ee maanta uu Baarlamaanku meelmariyay, wuxuuna bulshada u ballanqaaday in lagu dhakhsan doono dhammaystirka dhismaha Xukuumadda, si loo guda galo hawlaha culus ee wax ka qabadka u baahan.